Maxaan ka ognahay drones-ka NISA ku qabatay Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaan ka ognahay drones-ka NISA ku qabatay Muqdisho?
Inta badan dowladaha reer Galbeed ee Mareykanku horkacayo, ayaa si aan qarsoodi lahayn kaga soo horjeeda in Itoobiya ay ka baxdo gacanta Western-ka, isla-markaana ay sida Eritrea hoos gasho, shuuciyadda Ruushka iyo Shiinaha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka qaranka NISA, ayaa todobaadkii hore gacanta ku dhigtay diyaaradaha iswada [Drones], kuwaas oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, ka hor inta aan la geyn xarunta hay’adda ee Habar Khadiijo.
Shaqsiyaad ajaanib ah oo u dhashay dalka Turkiga, isla-markaana waday diyaaradaha ayaa xabsiga la dhigay, waxaana ugu danbeyn damiin bannaanka ku keenay safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz.
Xubno ka tirsan saraakiisha NISA, u qaabilsan garoonka diyaaradaha, oo aan ka gaabsannay in aan magacooda baahinno ayaa Keydmedia Online, u sheegay in diyaaradahaan ay ku wajahnaayeen degaannada maamulka Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe.
Gacan ku dhigidda diraaradaahan kadib, wareegto ka soo baxday xaafiiska Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan, ayaa lagu mamnuucay in diyaaradaha Drones-ka aan laga soo dejin karin degaannada Puntland, sababo la xariira amniga.
Sida uu isagu caddeeyay, waxaa Drones-kaan dalka keenay Zakariye Xaaji Cabdi, oo ka mid ahaa xubnihii Baarlamaankii 10-aad ee afartii sano ee la soo dhaafay sida weyn u taageerayay Farmaajo, Zakariye waxaa lagana soo doortaa Puntland.
Zakariye Xaaji, oo wareysi siiyay warbaahinta maxalliga ah, wuxuu hoosta ka xariiqay in Farmaajo iyo hoggaanka hay’adda NISA, ay masuul ka yihiin la wareegidda Nabad-sugidda ee diyaaradaha, taas oo uu ku tilmaamay qeyb ka mid ah, dhibaato uu nidaamkii Farmaajo dalka ku yahay muddo dheer.
Wuxuu sheegay in diyaaradaha ay leedahay shirkadda Hufan oo ka shaqeysa la dagaalanka cayayaanka Beeraha iyo waraabka beeraha, wuxuu tlmaamay inuu maxakamad la kori doono Farmaajo, oo weerar ku ah shaqsiyaddiisa iyo damaciisa siyaasadeed.
“Madaxweyne Deni, waxaa been u sheegay Farmaajo iyo NISA, waxa ay cayayaanka baraha bulshada ku taageera ay u sheegi jireen, ayay u sheegen Deni, wuxuuna u qaaday wax qatar ku ah amniga Puntland”. Ayuu yiri Zakariye.
Dhanka kale, dhawaan Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, wuxuu xaqiijiyay in dagaalyahannada TPLF, ee dagaalka kula jira Dowladda Itoobiya, ay garab ka helayaan waddmo shesheeye, taas oo loo fasirtay saacidaad dhanka cirka ah.
Taasi waxa ay sida loo qaateenka ah horseedi kartaa, in diyaaradaha wax basaasa, laga dajeyo dalka dariska la ah Itoobiya si dhulka looga galiyo waddankaan, loona geeyo goobaha ay isku hor fadhiyaan mucaaradka iyo dowladda, iyadoo lagu caawinayo TPLF, in ay ogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo dhaqdhaqaqyada ay wadaan ciidanka dowladda ee furimaha ku sugan.
Zakariye Xaaji Cabdi, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka, sida weyn u sheegtay wadaniyadda beenta ah waxuuna dad badan ka dhaadhiciyay inuu neceb yahay Itoobiya, hayeeshee, inta badan dadka yaqaanna ayaa ku doodaya inuu si hoose ula shaqeyn jiray nidaamkii Tigreega ee muddada ka talinayay Itoobiya.
“Diyaaradaha uu Zakariye Xaaji Cabdi, ka soo dejiyay Muqdisho, waa macquul in loo waday Itoobiya, oo waddamo shisheeye ay magaciisa dalka ku soo galiyeen, taasina uu hor istaagay Farmaajo oo saaxiib dhow la ah Abiy Axmed”, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha NISA ee garoonka diyaaradaha oo aan magaciisa qarinnay.